သွားတွေကို ဘယ်လို ပြုပြင်လို့ရလဲ? - Latha Dental Clinic
သွားပေါ်အောင် ပြုံးလိုက်တိုင်း အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတာကတော့ သွားတွေညီညာမှုမရှိတာပါပဲ။ သွားခေါတာ၊ သွားကြဲတာ၊ သွားထပ်တာနဲ့ မေးရိုးတွေ ငေါထွက်နေရတာဟာ ကိုယ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေ မဟုတ်ပေမယ့် ပြန်ပြီး ပြုပြင်နိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်။ သွားတွေကို ဘယ်လိုပြုပြင်လို့ရလဲ?
သွားညှိတဲ့ ကိရိယာတပ်ဆင်အသုံးပြုပြီး ညီညာတဲ့ သွားလေးတွေအဖြစ် ဖန်တီးပြုပြင်လို့ရပါပြီ။ Brace (စတီးကြိုး) တပ်ပြီး သွားညှိနိုင်သလို၊ ညှိလို့ညှိထားမှန်း မသိသာတဲ့ Invisalign အကြည်ရောင် သွားညှိကုသမှုတွေကိုလည်း ခုခေတ်လူငယ်တွေ တော်တော်များများလုပ်နေကြပါပြီ။
1.အကြည်ရောင်သွားစွပ် ဖြစ်တဲ့အတွက် သွားညှိထားမှန်း မသိသာစေခြင်း။
2.နောက်ဆုံးပေါ် သွားညှိစနစ်ဖြစ်လို့ တစ်ခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမရှိခြင်း။
3.Brace လိုမျိုး သွားကြားတွေထဲ အစာကပ်ကျန်နေတာမျိုးမရှိခြင်း။
4.ပုံမှန်အချိန်တွေအတိုင်း အစာတွေကို စားနိုင် ဝါးနိုင်ပါတယ်။
5.လျှင်မြန် လွယ်ကူစွာဖြင့် အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာစေပြီး သွားများကိုညှိလို့ရပါတယ်။
ဒီ Invisalign ကုသမှုကိုတော့ Latha Dental Clinic မှဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကုသမှုခံယူလိုသူများအနေဖြင့် ဆရာဝန်နှင့် အရင်ဆုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရနေပါပြီနော်။ Dental Checkup များအသေအချာပြုလုပ်ပေးပြီးမှသာ နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာများဖြင့် ကုသပေးနေပါတယ်။
Tags: Invisalign Latha Dental Clinic